VACGF 200006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀၀
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF20000
VACGF20000 Automatic Bottle Filling 6-In-1 Machine is an essential machine in producing bottled water.
VACGF20000 model is designed for long-term operation with high capacity. To learn more about VACGF200006in 1 automatic bottle filling machine, contact us now at 0949 414141
VACGF200006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်က ရေဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
VACGF20000 စက်ကို လုပ်ဆောင်မှုမြင့်ပြီး ကြာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ VACGF200006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်
၀၉-၄၉၄၁၄၁ ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
This isahigh-end bottle filling machine with6automatic steps to increase production capacity to 20,000 bottles of 500ml per hour.
ဒီစက်က် အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ပါပြီး တစ်နာရီမှာ 500 ml ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
VACGF20000 model applies the most modern pet bottle filling technology of the United States. The entire production process is automatic to help save maximum labor costs for the manufacturers.
VACGF 20000 စက်ကို US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အလုပ်သမားစရိတ် သက်သာစေဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခုလုံးဟာ အော်တို ဖြစ်ပါတယ်။
The water tanks, machine frame and many other components of this model are made of stainless steel, bringing long shelf life.
ရေစည်များ၊ စက်ဖရိန်နဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးက စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ကြာရှည်ထားသိုလို့ ရပါတယ်။
If you are looking to modernize your bottled water production and get higher operation efficiency, This VACGF200006in 1 automatic bottle filling machine will beaperfect choice for you.
တကယ်လို့ မင်းရဲ့ ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ချင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VACGF200006IN 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်က အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
VACGF200006in 1 automatic bottle filling machine - meeting ISO standard
VACGF20006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်- ISO စံချိန်နှင့် ကိုက်ညီခြင်း
Produced on the most modern filling line of the United States, VACGF20000 model has numerous outstanding advantages compared to the previous6in 1 automatic machines.
US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ လိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် VACGF 20000 စက်ဟာ အရင်က စက်တွေထက် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။
• High filllng speed: 20,000 bottles/hour
• လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့အရှိန်မြင့်ခြင်း-တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀
• High durability: The machine is made of stainless steel, withasophisticated and eye-catching design.
• ကြာရှည်ခံခြင်း-စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ဒီဇိုင်းကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
• The machine hasalong shelf life of over 15 years
• ၁၅ နှစ်ကျော်အထိ ထားသိုနိုင်ပါတယ်
• Stable automatic bottle filling process with high efficiency
• လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်ပြီး တည်ငြိမ်စွာ အော်တိုဖြည့်ပေးပါတယ်
• Only 1 operator is required to reachahigh capacity of 20,000 bottles/hour,
• တစ်နာရီမှာ ဘူး ၂၀၀၀၀ ဖြည့်ပေးနိုင်ရန် အော်ပရေတာ တစ်ယောက်သာ လိုပါတယ်။
• The entire production and assembly process ensures ISO 9001:2015 standard.
• ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုလုံးက ISO 9001:2015 စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Viet An ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်လက်မှတ်-ISO 9001 စံနှုန်း
Suitable for the manufacturers producing purified water and non-carbonated soft drinks of large scale.
ရေသန့်နဲ့ အချိုရည်တွေ အများအပြားထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
VACGF200006in 1automatic bottle filling machine supplied by Viet An
Viet An ရဲ့ VACGF200006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
Viet An General Trading Joint Stock Company is proud to bealeading company in manufacturing, importing, distributing and installing genuine6in 1 and3in 1 automatic bottle filling and capping machines. Viet An General Trading Joint Stock Company has been equitized since Aug/2009.
Viet An ကုမ္ပဏီဟာ6in 1 နဲ့3in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး တင်ပို့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Viet An ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
We have been constantly updating and applying the latest and most modern production technologies in the world to our products in order to satisfy all our customers and positively contribute to the development of the country's beverage production industrialization.
ကျွန်တော်တို့တွေက ကမ္ဘာ့ ခေတ်အမီဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ထည့်သွင်းပြီး ၀ယ်ယူသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးနေတဲ့အပြင် နိုင်ငံရဲ့ ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်မှု စက်မှုလုပ်ငန်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
Since its establishment up to now, Viet An Company has continuously grown and developed in both size and sales. Each year, Viet An supplies to the domestic and foreign markets thousands of automatic bottle filling machines with capacities ranging from 2,000 to 2,4000 bottles/h.
Viet An ကို စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ခုချိန်ထိ အရွယ်အစားရော ပမာဏပါ စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ Viet An မှ နှစ်စဉ် တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၂၀၀၀ မှ ၂၄၀၀၀ ထိ ဖြည့်ပေးနိုင်သော လောင်းဖြည့်တဲ့စက် ထောင်ပေါင်းများစွာကို ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
With continuous efforts, in recent years, Viet An has achievedalot of great achievements, including:
Gold Medal Vietnam High Quality Goods in 2009
Golden Lotus Vietnam High Quality Goods in 2009
Leading brand in Vietnam in 2015
ISO9001-2015 Certificate for production process of water filtration and tube ice making machines
The best brand in3regions in 2017
မလျှော့ခဲ့တဲ့ ဇွဲလုံ့လကြောင့် Viet An မှ ဆုတံဆိပ်များစွာ ဆွတ်ခူးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ရွှေတံဆိပ်ဆု
၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ရွှေတံဆိပ်ဆု(ဗီယက်နမ်)
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်
ရေစစ်စက်နဲ့ ရေခဲထုတ်စက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ISO 9001:2015 လက်မှတ်
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ နယ် ၃ ခုတွင် အကောင်းဆုံး ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်ဆု
Being recognized by Viet Nam Association for Anti-counterfeiting and Trademark Protection (VATAP) for actively participating in the movement.
Be honorably listed in “Top 100 Enterprises” to report achievements and pay New Year's visits to President Truong Tan Sang, President Tran Dai Quang at the President Palace.
ဗီယက်နမ်အဖွဲ့အစည်းမှ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ အတွက် ပစ္စည်းအတုမဟုတ်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကို ကာကွယ်ခြင်း (VATAP)ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း
Viet An မှ မကြာသေးမီက သမ္မတ Truong Tan Sang, သမ္မတ Tran Dai Quang နဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် Nguyen Xuan Phuc တို့ထံ သမ္မတအိမ်တော်မှာ နှစ်သစ်ကူးအလည်အပတ်သွားရတဲ့ လုပ်ငန်း ၁၀၀ ထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်း
Viet An မှ ဆွတ်ခူးခဲ့သော ဆုအချို့
6 automatic steps of VACGF20000 Automatic Bottle Filling Machine
VACGF20000 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်
Made of stainless steel, the air conveyor has shiny appearance and works well inawet environment withashelf life of more than 15 years.
The conveyor connects the air blowing machine to the VACGF200003in 1 bottle filling machine.
Without the conveyor, capacity cannot be ensure, the bottles will not be put together. Thus, it will affect operation of the clamping heads inside the washing machine.
စတိန်းလက်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ဒီစက်က တောက်ပပြီး စိုစွတ်တဲ့ နေရာတွေမှာတောင် ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်ပြီး ၁၅ နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ အထားခံပါတယ်။
ဒီစက်မပါဘဲနဲ့ ဘူးတွေကို အတူတူ ထားလို့မရတာကြောင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အာမမခံနိုင်ပါဘူး။
ဒါက ဆေးကြောပေးတဲ့စက်မှာရှိတဲ့ ညှပ်ပေးတဲ့ ခေါင်းတွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
2+3+4 steps: Automatic washing, filling, capping (3 in 1)
၂+၃+၄ အဆင့်များ- အော်တိုဆေးပေးခြင်း၊လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း
VACGF20000 is equipped with 40 washing heads, 40 filling heads and 10 capping heads.
Thanks to this upgrade, the entire washing, filling and capping process of this model will be much faster than other automatic machines.
The machine can replace 10-12 operators. It will help you savealot of labor cost, ensure safety during production process and increase economic efficiency
VACGF 20000 စက်ကို ဆေးကြောပေးတဲ့ ခေါင်း အခု ၄၀၊ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း အခု ၄၀၊ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁၀ ခုတို့နဲ့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီလိုအဆင့်မြှင့်ထားတဲ့အတွက် ဆေးကြောခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးက အခြားစက်တွေထက် ပိုပြီး မြန်ပါတယ်။
ဒီစက်က အော်ပရေတာ ၁၀ ယောက်ကနေ ၁၂ အစား အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်သမားစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်မယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ် လုံခြုံမယ်။ စီးပွါးရေး အကျိုးများမယ်။
Fifth step: Automatic cap loading
Automatic cap loading machine အဖုံးများကို အော်တိုသယ်ပေးသောစက်
This machine is used to load the cap automatically with no manpower required. It will transfer the caps from the tray to the washing, filling and capping machine throughacap duct. There is an air blowing system integrated at top of the conveyor to blow the caps from the conveyor to the cap duct in correct direction quickly.
ဒီစက်ကို လူလုပ်အားမလိုဘဲ အဖုံးတွေကို သယ်ယူတဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်။ ဒီစက်က ဗန်းထဲမှာရှိတဲ့ အဖုံးတွေကို ပြွတ်ကိုဖြတ်ပြီး ဆေးကြောပေးခြင်း၊ လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်း စက်တွေထဲကို ရွှေ့ပေးပါမယ်။ ရွေ့လျားစက်ရဲ့ အပေါ်မှာ အဖုံးတွေကို တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ ဦးတည်ချက်မှန်မှန်နဲ့ မှုတ်ပေးတဲ့ လေမှုတ်စနစ်ရှိပါတယ်။
Anomaly inspection machine မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးသောစက်
The machine is simply designed but the result of random checking is absolutely exact.
Investment cost is very low, just several million dongs. Thus, it is widely chosen byalot of customers.
ဒီစက်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပေမယ့် စစ်ဆေးပေးတာကတော့ လုံးဝကို တိကျပါတယ်။
ငွေအရင်းအနှီးလည်း သိပ်မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၀ယ်ယူသူတွေအများစုကလည်း ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
Other automatic stages - purchased separately (optional)()
In addition to above6automatic steps,VACGF200006In 1 Automatic Bottle Filling Machine the customers can consider to invest below automatic machines to save labor cost and improve productivity:
အပေါ်က အဆင့် ၆ ဆင့်အပြင် VACGF200006In 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်တွေလည်း တပ်ဆင်လို့ ရပါသေးတယ်။
1. VALP20000 bottle loading and arranging machine:
VALP20000 ဘူးများကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
Load and arrange the bottles automatically with the capacity of 20,000 bottles/hour. The machine can load and arrange different types of bottles, including 350ml, 500ml, and 1,500ml bottles.
တစ်နာရီမှာ ဘူး ၂၀၀၀၀ ကိုအော်တို သယ်ယူုပြီး စီ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစက်က 350 ml,500 ml,1500 ml ဘူးတွေအပါအ၀င် ဘူးအမျိုးအစား အများအပြားကို သယ်ပြီး စီပေးနိုင်ပါတယ်။
Capacity (BPH) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 15,000-20,000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 3
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 3200X3200X2500
Weight (Kg) အလေးချိန် 2200
2. VAD22000 Bottle Blowing Machine
VAD22000 ဘူးများကို မှုတ်ပေးသောစက်
Pet bottle blowing machine ဘူးများကို မှုတ်ပေးသောစက်
Withablowing system including multi nozzles, the bottles are quickly dried withamaximum capacity of 22,000 bottles per hour.
ဒီစနစ်မှာ နော်ဇယ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ဘူးတွေကို တစ်နာရီမှာ ၂၂၀၀၀ နှုန်းနဲ့ မြန်မြန်ခြောက်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
3. VAL22000 Labeling machine with2heads:
VAL 22000 ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်ပေးတဲ့စက်
Labeling machine with2heads ခေါင်းနှစ်ခုပါသော လေဘယ်တပ်ပေးတဲ့စက်
The machine is equipped with2labeling heads, enabling high labeling speed with an hourly capacity of 22,000 labels.
ဒီစက်မှာ ခေါင်းနှစ်ခု ပါဝင်ပြီး ခေါင်းတစ်ခုစီက တစ်နာရီမှာ လေဘယ် ၂၂၀၀၀ တပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 17,000-22,000
Weight (Kg) အလေးချိန် 900
4. The machine rotates automatically to label the bottles with opp labels and melt- VAR22000:
Capacity (bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 17,000-22,000
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား Contact
Weight (Kg) အလေးချိန် Contact
5. VAS18000 Steam Membrane Shrinking Machine
VAS18000 အပူဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
The machine hasaboiler to generate steam to shrink the film onto the bottles. It has an hourly capacity of 18,000 bottles.
ဒီစက်မှာ ဘူးတွေပေါ်မှာ ဖလင်ကို ရှုံ့ရန် ရေနွေငွေ့ကို ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ရေနွေးအိုး ပါဝင်ပါတယ်။ သူက တစ်နာရီမှာ ဘူးပေါင်း ၁၈၀၀၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 15,000-18,000
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 36
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 2200*560*1700
Weight (Kg) အလေးချိန် 180
Print the expiry date with an hourly capacity of 22,000 bottles
တစ်နာရီမှာ ဘူး ၂၂၀၀၀ ဘူးပေါ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ပရင့်ထုတ်လုပ်နိုင်တယ်။
VAGM20000 လော့အလွှာကို အော်တို ရှုံ့ပေးသောစက်
Automatic log membrane shrinking machine
Easy to wrap the bottles into different packs of 6, 12, 24 bottles per pack.
လော့အလွှာကို အော်တို ရှုံ့ပေးသောစက်
၆၊၁၂၊၂၄ စသဖြင့် ဘူးများကို လွယ်ကူစွာ ပါကင်ထုတ်နိုင်သည်။
Please refer technical information of the machine to see more details about technical information of the mandatory and optional equipment.
၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့်တွေနဲ့ ရွေးချယ်လို့ရတဲ့ အဆင့်တွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို သိရှိအောင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်တွေကို ရည်ညွှန်းပေးပါ
With6built-in automatic steps, the manufacturing process will be operated automatically with high capacity.
• အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်က အော်တိုလည်ပတ်ပြီး လုပ်ဆောင်မှုလည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။
• High quality material:Almost components constituting the machine are made of high-grade stainless steel, which doesn't rust and is easy to clean. Thanks to its special material, the machine is always shiny, easy to clean and safe to use.VACGF20000 is equipped with 40 washing heads, 40 filling heads and 12 capping heads.
အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းဒီစက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးကို သန့်ရှင်းရ လွယ်ကူပြီး သံချေးမတက်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲတောက်ပနေပြီး သုံးရတာ လုံခြုံမှုလည်း ရှိပါတယ်။VACGF20000 စက်ကို ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း အခု ၄၀၊ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း အခု ၄၀ နဲ့ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်း ၁၂ ခုနဲ့ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
• Only 1 operator is required for the entire production process:
Compared to other filling machines, this6in 1 automatic filling machine requires less manpower. Specifically, the enterprise can save up to 100 million dongs of labor cost every month.Why should use Viet An’s VACGF200006in 1 automatic filling machine
ထုတ်လုပ်မှုတစ်လျှောက်လုံးမှာ အော်ပရေတာ တစ်ယောက်သာ လိုအပ်ပါတယ်။
တခြားစက်တွေနဲ့စာရင် ဒီစက်ဟာ လူလုပ်အား အနည်းငယ်သာ လိုအပ်ပါတယ်။ လစဉ် အလုပ်သမားစရိတ်အတွက် ဗီယက်နမ်ငွေ သန်း ၁၀၀ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Currently, we are applying free shipping-installation for all of our products, including this VACGF200006in 1 automatic filling machine.
အခမဲ့ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း
VACGF200006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်အပါအ၀င် အခြားပစ္စည်းများကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး တပ်ဆင်ပေးနေပါတယ်။ အကျုံးဝင်တဲ့ နယ်တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Applied provinces: An Giang, Ba Ria - Vung Tau, Bac Giang, Bac Kan, Bac Lieu, Bac Ninh, Ben Tre, Binh Dinh, Binh Duong, Binh Phuoc, Binh Thuan, Ca Mau, Cao Bang, Dak Lak, Dak Nong, Dien Bien Dong Nai, Dong Thap, Gia Lai, Ha Giang, Ha Nam, Ha Tinh, Hai Duong, Hau Giang, Hoa Binh, Hung Yen, Khanh Hoa, Kien Giang, Kon Tum, Lai Chau, Lam Dong, Lang Son, Laos Cai, Long An, Nam Dinh, Nghe An, Ninh Binh, Ninh Thuan, Phu Tho, Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Quang Ninh, Quang Tri, Soc Trang, Son La, Tay Ninh, Thai Binh, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Thua Thien Hue, Tien Giang, Tra Vinh, Tuyen Quang, Vinh Long, Vinh Phuc, Yen Bai, Phu Yen. Can Tho, Da Nang, Hai Phong, Hanoi, HCM
After installing and running trial operation, our engineers will provide the customers with clear technical instruction. Instruct the customers on how to operate the machine, check and maintain the machine to ensure the best use.
တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာ အင်ဂျင်နီယာများမှ နည်းပညာဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်တွေကို သေချာရှင်းပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ယ်ယူသူတွေကို စက်ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမယ်၊ အကောင်းဆုံး အသုံးပြုမှုဖြစ်အောင် ဘယ်လို စစ်ဆေး ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာကို လမ်းညွှန်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။
• Quality commitment:
We are confident to assure the quality of this VACGF200006in 1 automatic bottle filling machine The product is genuine with the shelf life of more than 15 years.
ကျွန်တော်တို့က VACGF 200006In 1 ဘူးများကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ ရှိပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းက စစ်မှန်ပြီး ၁၅ နှစ်ကျော် ထားသိုနိုင်ပါတယ်။
• Price commitment:
Viet An is the direct importer, distributor as well as manufacturer. Thus, our products always go directly to the customers with no intermediaries or intervening. This ensures that the purchase price of the machi ne in Viet An will be 10-20% cheaper than other suppliers.
Viet An က တိုက်ရိုက်တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးတဲ့သူဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀ယ်ယူသူတွေလက်ထဲကို ကြားခံမရှိဘဲ တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Viet An က အခြားသူတွေထက် ၁၀-၂၀% ပိုပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
• Long-term warranty service:
When purchasing and installing Viet An's VACGF20000 6-in-1 automatic bottle filling machine, customers will havea12-month warranty from the date of acceptance and handover of the filling line.After the warranty period, Viet An will always accompany you. In cases of any problems incurred, please contact our maintenance department for detailed instructions on how to handle and fix the problems.
ဒီစက်ကို ၀ယ်ယူတဲ့အခါ ၀ယ်ယူသူတွေက ၁၂ လ အာမခံချက်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံကာလမှာ ကျွန်တော်တို့က ၀ယ်ယူသူတွေနဲ့ အတူ ရှိနေပေးမှာပါ၊ ပြသနာ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဋ္ဌာနကို ဆက်သွယ်ပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းနိုင်ပါတယ်။
Notes when using VACGF20006in 1 automatic filling machine
VACGF 20000 ဘူးတွေကို အော်တိုဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို သုံးတဲ့အခါ မှတ်သားစရာများ
+ Requirements on installation area Please follow below requirements on installation area when installing VACGF20006in 1 automatic filling machine. The minimum area must be 100m2
+တပ်ဆင်ဖို့ နေရာလိုအပ်ပါတယ်။ နေရာက အနည်းဆုံး ၁၀၀ စတုရန်းမီတာ ရှိရပါမယ်။
+ Infrastructure: Ensureastable power line system withacapacity of 380v-50hz
+ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ- 380v-50hz လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အတူ ပါဝါလိုင်းစနစ်ကို သေချာစေပါတယ်။
+ Operate properly following our instructions. Check the machine daily, weekly to ensure stable production and capacity.
+ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ စက်ကို တည်ငြိမ်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ဖို့ နေ့စဉ် လစဉ် စစ်ဆေးပါ။
Technical specifications of VACGF20000 automatic filling machine
VACGF 20000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF20000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMS
VACGF 20000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 40
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 40
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 12
Machine capacity (350ml bottles/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 16,000- 20,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 16,000- 20,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 5,000-5,500
Power ပါဝါ 7.5
3 in 1 Dimension(LxWxH) (mm)3in 1 အတိုင်းအတာ 3600*2700*2850
Weight အလေးချိန် 7500
Air conveyor လေဖြင့် သယ်ယူပေးသောစက် 10000*220*1000
Plastic conveyor (LxWxH) (mm) ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် 60000*160
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF200006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF200006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
1. VALP20000 bottle loading and arranging machine
VALP20000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက် VAS 18000
Hỏi đáp & đánh giá VACGF 200006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်